HORDHAC: Watford v Liverpool – Gool FM
HORDHAC: Watford v Liverpool
CR Shariif November 24, 2018
( Premier League ) 24 Nof 2018. Liverpool ayaa booqaneysa kooxda Watford cayaaraha 13-aad ee todobaadkan Premier League.
Reds weli waa guuldarro la’aan horyaalka waxayna marti ku yihiin garoon aysan kusoo adkaan labadii booqasho ee ugu dambeysay.
Waqtiga: 06:00 pm ( SGA )
Garsoonka: Vicarage Road
Xiddiga qadka dhexe Watford Etienne Capoue ayaa diyaar ah markii uu kasoo laabtay ganaax, halka Sebastian Prodl uu kasoo kabtay dhawaac lugta ah.
Taam qabka buux ee Troy Deeney ayaa laga yaabaa inuu kusoo bilaawdo safka koowaad markii u horreysay tan iyo 6 bishii October, laakiin Adalberto Penaranda ayaa cayaari doonin inkastoo uu helay warqada shaqada.
Adam Lallana ayaa ka maqnaan doona Liverpool sababo dhaawac yara.
Jordan Henderson ayaa kasoo laabtayvabasho uu ka qabay muruqa taaso sababtay in loogu yeero kulamada heera caalmi ee qaranka England.
Liverpool ayaa guuleysatay sagaal kamida 11-kii kulan ee lasoo dhaafay oo ay dhammaan tartamada la cayaartay Watford,waxayna shabaqa ilaasheen todoba kamida ( kulan barbario, iyo kulan guuldarro ah ).
Watford waxay ahaayeen kuwa 3-0 Premier League kaga guuleystay Liverpool garoonkooda bishii December 2015 laakiin intaa kaddib waxay heleen kaliya dhibic qura iyagoo laga dhaliyay 17-gool shan kulan oo ka dambeysay guuldarrada Reds.
Marnaba barbaro goolal la’aan ma aysan galin kooxahan 22 cayaar oo ay hore ugu kulmeen cayaaraha sare ee horyaalka.
Watford ayaa leh 20 dhibcood waana dhibcihii ugu sareyay kaddib 12 kulan oo horyaalka la dheelay xagaagan. Dhibcihii ugu badnaa oo ay heleen 13 kulan waxay ahaayeen 21 dhibcood, xagaagii 1982 iyo 2017.
Liverpool ayaa guuh ahaan leh 30 dhibcood 12 kulan ee ilaa hadda laga dheelay horyaalka Premier League, waana rikoodhkoodii ugu weynaa tan iyo xili cayaareedkii 2002-03.
HORDHAC: Manchester United v Crystal Palace
HORDHAC: West Ham v Manchester City